Warbixin kashiftay inta goor ee uu Mareykanka maalin kasta diyaarado dagaal u diro Somalia iyo Yemen. - Caasimada Online
Home Warar Warbixin kashiftay inta goor ee uu Mareykanka maalin kasta diyaarado dagaal u...
Warbixin kashiftay inta goor ee uu Mareykanka maalin kasta diyaarado dagaal u diro Somalia iyo Yemen.
Wargayska Washington Post ayaa wax ka qoray dhaq dhaqaaqayada Ciidamada Maraykanklu ay ka wadaan Saldhigga Milatery ee Maraykanku ku leeyahay Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti.
Dhaq Dhaqaaqan ayuu Wargaysku ku sheegay mid Ciidamada Maraykanku ay ku sii laba jabbaarayaan la Dagaalank waxa loo yaqaano Argagixisada Geeska Afrika iyo Dalka Yaman.
Diyaaradaha drones ka loo yaqaano ee aysan cidi wadin ayaa la sheegay in maalin walba ay sameeyeen duulimaad illaa Lix iyo Toban goor ah oo maalin walba ay samaynayaan Diyaaradahaas.
Diyaaradahaas oo duulimaadyo bar tilmaameedsi ah qaada ayaa sida lagu soo waramayo waxaa ay u duulaan Dalka Yaman iyagoo qaarkoodna ay u soo gudbaan dhinaca Soomaaliya.